आज टुङ्गो लाग्ला त पार्टी एकताको ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आज टुङ्गो लाग्ला त पार्टी एकताको ?
काठमाडौं । पार्टी एकता अन्यौलमा परेको समाचार आइरहेका बेला एमाले र माओवादीले एकता खाकामा सहमति गर्दैछन् । पार्टी एकताका लागि बाम एकता संयोजन समितिको बैठक आज बस्दैछ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गर्न आज बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आज अपराहन ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएको एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए ।
एकता सम्बन्धी राजनीतिक र विधानसहितको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पार्न दुइटा कार्यदल बनेका थिए । माधव नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदन र रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले विधानसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरिसकेका छन् । तीनै प्रस्तावमाथि संयोजन समितिमा छलफल हुनेछ ।
कार्यदल स्तरमा ‘जनयुद्ध’ शब्द, पार्टीको चुनाव चिहन ‘सूर्य’ राख्ने कि नराख्ने र २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुवै दलका तर्फबाट कति–कति जना राख्ने भन्नेमा सहमति हुन बाँकी छ ।
समितिले यो विषयमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता बराबरीको सिद्धान्तमा हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि यो विषयलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा समितिमा छलफल हुनेछ ।
दुई दलबीच यसअघि चुनावमा ६० र ४० प्रतिशतको भागबन्डा भएको थियो । तर चुनावी परिणाम ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातमा आएको थियो । एमालेले चुनावी परिणामलाई आधार बनाउन खोजेको छ भने माओवादीले दुई पार्टीबीचको एकता भएकाले समान हैसियत हुनुपर्ने अडान राखेको छ । समितिमा सहभाष्गिता, चुनाव चिन्ह र जनयुद्ध शब्द मुख्य तीन विषयमा बुरा मिल्न बाँकी छ ।